Golaha Ammaanka oo warbixin rajo & cabsi u dhaxaysa kasoo saaray xaaladda Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Golaha Ammaanka oo warbixin rajo & cabsi u dhaxaysa kasoo saaray xaaladda...
Golaha Ammaanka oo warbixin rajo & cabsi u dhaxaysa kasoo saaray xaaladda Somalia
(Hadalsame) 16 Feb 2022 – Waa in doorashada la soo gebagebeeyaa xilli ay ka sii darayso abaartu, sida uu dhegeystey golaha ammaanku.
Madaxda Soomaaliya waa in ay dhinac iska dhigaan khilaafaadkooda oo ay si degdeg ah u soo gebagebeeyaan hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo, sidaas waxaa Golaha Ammaanka u sheegay sarkaal sare oo Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Talaadadii, isagoo xusay in doorashooyinka qaranku ay hadda dib u dheceen in ka badan hal sano waqtigii loogu talagalay, matalaadda haweenkana ay tahay mid si wayn looga fogaanayo.
James Swan, Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa Xafiiska Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), ayaa safiirrada uga warbixiyay horumarradii siyaasadeed ee ugu dambeeyay – oo ay ku jiraan gebagebada doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka, iyo doorashada Golaha Shacabka ee socota – iyo sidoo kale iyadoo ay sii kordhayaan weerarrada ay gaysanayaan kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka bini’aadminnimo ee sii kordhaya ee ka dhashay mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee gobolka soo mara muddo tobannaan sano ah.
Doorasho xasaasi ah
Ergayga Gaarka ah wuxuu sheegay in, laga soo bilaabo warbixintiisii ugu dambeysay ee Nofeembar 2021, qorshayaasha doorashada – oo markii ugu horreeysay la isku raacay horraantii sanadkaas – ay si aad ah horumar u sameyeen.
“In kasta oo tani ay tahay horumar la soo dhowaynayo, haddana waxaa loo baahan yahay in la sii dardar-geliyo,” ayuu yiri, isagoo xusay in 130 ka mid ah 275-ta kursi ee Golaha Shacabka la soo buuxiyay illaa hadda.
Waxa uu tilmaamay in 23 ka mid ah kuraastaasi ilaa hadda ay heleen haweenku, taasi oo ku dhow 22% tirada guud, isagoo sheegay in tiradaasi ay aad uga yar tahay 30% oo ah qoondada haweenka ee ay ku heshiiyeen madaxda siyaasadda dalku, waxaana uu ku boorriyay dhammaan dhinacyadu inay dedaalladooda sii laba laabaan si loo gaaro yoolkaas.
Iyadoo xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda Soomaalida qaarkood ay si teel-teel ah u sii kordhayaan – taas oo ah mid inta badan la xiriirta natiijada “jahawareerinta iyo qar ka tuurka” – wuxuu sheegay in ilaa hadda si degdeg ah wax loo xakameeyey.
“Hase ahaatee, khatarta dhabta ah ayaa weli ah in xisaab khaldan oo la isku dhufsadaa ay horseedi karto in xiisadahani colaad u gudbaan,” ayuu ka digey.
Dhinaca ammaanka, kooxda Al-Shabaab ayaa weli khatar ku ah ammaanka Soomaaliya, iyadoo Gobolka Banaadir iyo Maamulka Koonfur Galbeed ay u yihiin xarun howlgal.
Sidoo kale bilihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay qaraxyada loo adeegsado walxaha macmalka ah iyo weerarrada ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay waxyeello kasoo gaartay dad shacab ah.
Isagoo xusay in qaabeynta mustaqbalka howlgalka Ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya, ee loo yaqaan AMISOM, ay hadda dib u eegisi ku socoto, Md. Swan wuxuu sheegay in QM ay ku howlan tahay wada-hadallo ay la yeelanayso Dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Afrika iyo deeq-bixiyeyaasha muhiimka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan oo farsamo ah laga hadlayo gaar ahaan dhanka mustaqbalka waajibaadkeeda iyo qaabaynta.
Horumarka ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyay hirgelinta Qorshaha Kala-guurka ee Soomaaliya, kaas oo fure u ah dib-u-qaabaynta iyo go’aaminta sida ugu dhaqsaha badan ee ay ammaanka ula wareegayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
Muuqaal bini’aadminnimo ‘aad u ba’an’
Dhanka kale, Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika ayaa wajahaya mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa ee ka dhaca muddo tobanaan sanadood ah.
Mr. Swan ayaa uga digay golaha in ilaa 7.7 milyan oo Soomaali ihi ay sanadkan u baahan yihiin gargaar bini’aadminnimo, iyadoo 4.3 milyan ay saameysay abaarta halka in ka badan 270,000 ay ku barakaceen.
Marka loo eego qiimeynta Haqab-beelka Cuntada iyo Nafaqada Soomaaliya ee dhowaan la soo saaray, oo ay daabacday Hay’adda Qaramada Midoobay ugu qaybsan Cunnada iyo Beeraha (FAO), in ka badan 1.4 milyan oo carruur ah oo ku sugan Soomaaliya – ku dhowaad kala bar dadka ay da’doodu ka yar tahay shanta sano ee dalka – ayaa laga yaabaa in ay la ildaran yihiin nafaqo-xumo ba’an abaarta taagan darteed.
Biyo yari daran ayaa ku khasabtay qoysaska inay u hayaamaan xarumaha magaalooyinka iyo magaalooyinka hareerahooda, taas oo ku darsamaysa 2.9 milyan oo qof oo horay ugu barakacay iskahorimaadyo iyo isbeddelka cimilada. Laga soo bilaabo Nofeembar 2021, qiimaha biyaha ee qaar ka mid ah meelaha ay sida xun u saamaysay abaartu ayaa kor u kacay ilaa 72 boqolkiiba.
Isagoo Golaha uga digaya in Qorshaha Waxqabadka Bani’aadminnimada ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya uu hadda yahay mid 2% oo keliya la maalgeliyey, Ergayga Gaarka ah wuxuu ku celiyay baaqiisa ku aaddanaa deeq-bixiyeyaashu inay kordhiyaan taageeradooda.
Previous articleYaa cadaaladsan sidii uu gumaystuhu Soomaalida u qaybiyey qarnigii 19-aad & sida ay iyadu maanta isu qabinayso?!
Next articleNetflix & naafaynta dhaqanka: Aragtiyaha ay faafiyaan & qaabka ay u gudbiyaan